प्रतिष्ठानमा आन्दोलनको औचित्य
कोभिड–१९ ले नेपाली जनजीवनै थिलथिलो बनाएको छ । यस अवस्थामा जनताको एकमात्र भरोसा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरतहरुमा निर्भर छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी अहिले कोभिड–१९ विरुद्धको युद्धका योद्धा हुन् । विभिन्न अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी कोभिड–१९ विरुद्ध सैनिककै जसरी कार्यरत छन् ।
आफूलाई सङ्क्रमण हुनसक्ने जोखिमको वास्तै नगरी जनतालाई सहज बनाउन खेलेको भूमिकाको कारण स्वास्थ्यकर्मी श्रद्धाका पात्र भएका हुन् । त्यसैले उनीहरुप्रति हुने कुनै पनि दुव्र्यवहारविरुद्ध देशव्यापी विरोध हुने गरेको छ भने सम्मानार्थ सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको ‘अघोषित आपतकाल’का अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको सकारात्मक भूमिकाको कारण नै नागरिक तहबाट यस्ता गतिविधि भएका हुन् । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा स्टाफ नर्सहरुले गरेको आन्दोलनले भने स्वास्थ्यकर्मीप्रति नागरिकको सद्भावमै केही प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।
प्रतिष्ठान धरानमा कार्यरत स्टाफ नर्सहरुले भदौ ८ देखि केही माग राखेर आन्दोलन थाले । कोभिड–१९ विरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेका स्टाफ नर्सहरुले स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थापनको विषय उठाएका थिए । ती स्वाभाविक वा जायज माग थिए । त्यसका लागि आन्दोलन गर्नु नै नपर्ने हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिबकरिब ‘अघोषित आपतकाल’ को अवस्थामा स्टाफ नर्सहरु आफैँ आन्दोलनमा उत्रनु अस्वाभाविक विषय हो । स्टाफ नर्सद्वारा गरिएको यो आन्दोलनले नागरिकको तहबाट गरिएको स्वास्थ्यकर्मीप्रतिको भरोसाको अवमूल्यन गरेको छ ।
कोभिड–१९ को जगजगीका बेला स्वास्थ्यकर्मीबाट अस्पतालमा आन्दोलन हुने अपेक्षा गरिएको थिएन । अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीहरु अभावबीच न्यूनतम सुविधामा कोभिड–१९ विरुद्ध मोर्चामा डटेकाछन् । हुन पनि राष्ट्रको समस्या प्रधान देखिएको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी वा अरू कसैको व्यक्तिगत वा सामूहिक समस्या गौण रहन्छ । यसको अर्थ कुनै सुरक्षा उपायबिना ज्यानै जोखिममा राखेर स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन ।
कोभिड–१९ ले उब्जाएको समस्यालाई आफ्नो माग पूरा गर्ने माध्यम वा शस्त्र बनाउनु नैतिकरुपमा इमानदार नदेखिनु नै हो । प्रतिष्ठानका स्टाफ नर्सले माग गरेको जोखिम भत्ता अहिले सरकारबाट नै निकासा भएको छैन । प्रतिष्ठानले त्यस विषयमा केही गर्न सक्ने अवस्था नहोला । यति त बुझिदिनु पर्ने हो । यसैगरी कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टिनको व्यवस्थाको माग सही देखिए पनि व्यावहारिकरुपले कार्यान्वयन गर्न कठिन छ । अस्पताल वा स्थानीय क्वारेन्टिनले धान्न नसकेर घरैमा बस्नुपर्ने अवस्था आएका बेला अस्पतालले स्टाफ नर्सहरुका लागि क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न सक्ला र ? प्रतिष्ठानकै दुईजना कोभिड–१९ सङ्क्रमित डाक्टरहरुलाई प्रतिष्ठानको अनुरोधमा घरैमा बसेका थिए ।
सेवा सुरु गर्दा सकारिएको उपलब्ध सेवा र सुविधामा सन्तोष गरेर आपूmलाई जोगाउँदै अहिले पेसागत धर्म पूरा गर्ने बेला हो । स्वास्थ्यकर्मीका रूपमा ‘नागरिकको स्वास्थ्य’ रक्षा पहिलो कर्तव्य हो । पन्जा, माक्स, पीपीई लगायतका विषयमा लागि सम्बन्धित प्रशासनसँग संवेदनशील भएर छलफल गरे आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था नहुनु पर्ने हो ।
प्रतिष्ठानका स्टाफ नर्सद्वारा गरिएको आन्दोलनप्रति समान्य नागरिकका रूपमा चिन्ता गर्नुपर्ने गम्भीर कारण आन्दोलनमा भौतिक दूरी कायम नगरिएको विषय हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारिगरेको भौतिकरसामाजिक दूरीको मापदण्डलाई समेत स्टाफ नर्सहरुले आन्दोलनका नाममा मिचिदिए । यो स्वास्थ्यकर्मीका हकमा त नैतिकरुपले पनि चिन्ताको विषय हो ।
भौतिक दूरीलाई उपेक्षा गरेर आन्दोलन चलिरहँदा (भदौ–१० सम्म) १२ जना स्टाफ नर्स कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित देखिए । कदाचित्, कुनै आन्दोलनकारी कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमितको सम्पर्कमा परेर उक्त आन्दोलनमा आएको भए स्थिति के हुन्थ्यो होला ? त्यसैले पनि यो आन्दोलन गर्ने र आफ्नो माग पूरा गराउन दबाब दिने उपयुक्त समय थिएन । औचित्य नदेखिएको आन्दोलनले आन्दोलनकारीहरूको व्यावसायिक धर्म र निष्ठामा प्रश्न उब्जाएको छ । बाह्रखरीबाट